Karina Razumovskaya: ubomi bomntu, abantwana, indoda, isithombe. I-Biography kaKarina Razumovskaya, ubudlelwane no-Artem Karasev
UTurgenevskaya ibhinqa eliselula: ubomi bomntu kaKarina Razumovskaya
UKarina Razumovskaya ufuna ukuba kwi-cinema, njengokuba ebomini, umfazi omncinci-onqabileyo, kodwa uhlala edlala ii-heroines ezinomculo. Ingelosi efihliweyo enamehlo aluhlaza isuswa kakhulu kwiindilo zemihlaba ezichukumisayo ezibuhlungu, ezidlala ngobuchule emacaleni omphefumlo oshushu, amadoda angenalo imimoya. Yintoni esinokuyithetha ngabasetyhini abazi kakuhle ukuba bafunde yonke into ebhaliweyo kwamehlo acacisayo yomculi. Ngezobuhle ezintle kunye nobuqotho, njengoKarina Razumovskaya, ubomi bobuqu buhlala bubuthathaka. Ingaba kunjalo, okanye umdlali we-St Petersburg ngaphandle kwemithetho?
Biography ka Karina Razumovskaya
Ubuntwana: Kusuka kumqhubi ukuya kumdlali weqonga
UKarina wazalwa ngo-Matshi 1983 kwintsapho yomkhumbi kunye nomfazi wendlu. Ukususela ebuntwaneni bokuqala, umphuphi omkhulu kunye nokuhleka kwaye kwabonakala ngokubonakala kwayo. Bobabini abazali kunye nogogo, ababehlala ixesha elide kunye nentombazana, baqonda ukuba ngoku kuvela uKarine yindlela ehambelana nabadlali. Kwaye ukuba le nto yayiyikrakra kakhulu kubazali, ke ugogo-umtsalane omkhulu we-cinema emnyama nomhlophe-wayephupha ngasese. Yaye intombazana ephupha ngokuxhaphaza - wayefuna ukuba ngumqhubi, umqhubi womlilo, umkhumbi-kodwa ngexesha elifanayo wayenomdla wokubukela ifilimu ezindala kunye nogogo wakhe kwaye wakhupha ngobuchule umdlalo wama heroines. Intombazana eyingozi yayingumsebenzi wobugcisa: wayenza imifanekiso, wayedlala kakuhle kwaye wayehlala ehlabelela. Ukunyanzelwa komculi nomculo waseFransi u-Alain Delon wadlala indima ebomini kwimpilo kaRazumovskaya. UKarina wayesazi ngentliziyo yerhafu yeqela elithi "iCinema" kunye ne "Nautilus Pompilius" kwaye akazange adide ukucula ngisho nakwiindawo zoluntu. Kwaye wahlabelela iingoma ngeeflethi ezinjalo abadlulayo-bayeke. Ngesinye isikhathi eMetro eMoscow, uKarina Razumovskaya, naphezu kobukeka bakhe unina, wayebulele ingoma kaButusov "U-Alain Delon akaphuzi i-cologne ...". Ilizwi elivakalayo lavakala ngomnye wabancedisi befilimu ethi "iBraking in Heaven" kwaye wamema intombazana enhle ukuba yenze inxaxheba yincinci encinane, eyayilungiselela isithuba sayo. Iifoto ezivela kwi-movie kunye neendlovu e-pink, zithengwa ngenkokhelo yokuqala, uRazumovskaya uyigcina ngokude ngoku.
Ziliphi iinyembezi uKarina Andolenko ezisuka kwamehlo? Tshukisa! Khangela apha
Iphupha lizaliseka, kodwa kungekhona eKarina ...
Emva kokugqitywa kwesikolo, uKarina wangena kwi-Academy ye-Theater Arts kwiPetersburg yakhe yasekuhlaleni, kwaye ngowama-2004, yedwa ovela kuyo yonke into, wangena kwingxube yeTovstonogov Great Drama Theatre phantsi kolawulo lukaKirill Lavrov. Iingcamango zikaRazumovskaya malunga nendawo yokuzonwabisa, njengehlabathi lembali, yaqhekeka ngokukhawuleza malunga "neengqungquthela." Kodwa umdlali we-actress wayemelana nawo onke amanqweno anzima kwaye wayinqoba uthando lwabalingane. Ubuthathaka obungaphandle kunye nobubele bubonakala bukhohlisayo, ngaphakathi kumdlali we-actress ufihla isosha eliqinileyo lesitishi. Umxholo wangaphakathi unceda umdlali weRazumovskaya iminyaka eyi-12 ukuba adlale ngempumelelo kwisiteji, kwaye ekuphumeni kwezenzo kwiifilimu.
Ubomi bomntu kaKarina Razumovskaya
Ukutshatyalaliswa komyeni wakhe
Kwi-Academy yezemidlalo uKarina Razumovskaya wadibana no-Artem Karasev, kwaye emva kweminyaka emine wamtshata. Umtshato ngokwesiko: umfazi omhle eengubo ezimhlophe, usapho oluqinileyo nolonwabileyo, abantwana abonwabileyo, izicwangciso ezidibeneyo - njengaye, kwaye akunjalo. Kodwa amaphupha enkosikazi yaseTurgenev yaqhekeza "intsapho enobubele". Kwakungekho buhlobo, kwaye kamva, kwabakho ukuba akukho ntsapho. Kwakukho ukhuphiswano olunzulu kunye nomyeni wakhe. U-Artem Karasev akazange akwazi ukuzidibanisa ngokukhawuleza kwaye, ngokubaluleke kakhulu, umsebenzi wakhe umfazi waphumelela ngempumelelo, kwaye emva kweminyaka engama-6 baqhekeza. Ukuphuka amaphupha uKarina Razumovskaya uya kubiza ukungcatsha aze ahambe entloko kunye nomsebenzi. Yaye intliziyo yakhe iya kusondela kwinqaba ekhuselekile.
UKarina Razumovskaya no-Artem Karasev. Umtshato
Ifoto yomtshato kaKarina Razumovskaya kunye no-Artem Karasev
Inyaniso eyoyikisayo malunga nobomi bomntu obakhokela uJulia Menshova. Khangela apha
UKarina Razumovskaya noVladimir Vdovichenkov: ulonwabo lwentsapho olulula
I-Megafon ngokubambisana ne-creative agency i-Instinct yenze i-movie encinci ethintekayo "Ibhokisi" elingenakuyigcina amagama ukuba abe kufuphi nalabo abathandayo ngokwenene. UKarina Razumovskaya noVladimir Vdovichenkov badlala isibini esitshatileyo silindele umntwana. Umfazi okhulelweyo ubiza umnyana wakhe othandekayo ukuba axelele iimvakalelo zakhe: mxelele ukuba indlela yabo yokulwa nayo ixabana ngayo kwakhona. Ukususela kumazwi kapapa, ukuba abantu abadala abakwazi ukuziphatha ngaloo ndlela kwaye bathembisa ukubuyela ngaphambili namhlanje, umntwana uyacima.
UVladimir Vdovichenkov kwiintengiso
I-recipe yokonwaba kwentsapho elula iyaziwa nguKarina Razumovskaya idlulileyo elide. Kodwa uTurgenev omdala abancinci abasetyhini abahlala ngexesha lethu, kunzima ukudibana nendoda enamaphupha afana nabo, kunye neentlobo zentsapho, kunye nobudlelwane obunzima. Kulula kakhulu, kodwa kulula kakhulu ukuba umntu afune iitshixo kwintliziyo yowesifazane xa ebafihla phakathi kweefury ezibizayo kunye ne-boucets chic okanye kwiindawo zokutyela. Ummeli uRazumovskaya akaze afune ukufihla izihluthulelo entliziyweni yakhe apho. Kwintombazana encinci, kodwa engenakubukeka ifihlwe emphefumlweni wakhe ongaqondakaliyo.
Kwaye uKhristina ukholelwa ukuba olunye usuku luya kulungiselela ukuba adibane nendoda yakhe. Uya kukubonga izinto ezingabonakaliyo (ukuthunga, ukubetha ngomnqamlezo, ukudibanisa), uya kubelana ngentshiseko yakhe yokupheka aze afune intsapho yolonwabo olulula: kunye nabantwana, izicwangciso eziqhelekileyo kunye nezingxoxo, wayenomdla kwada kwasa. Okwangoku, ebomini bobuqu bomntu siqu kaKarina Razumovskaya, kukho ukukhawuleza. Kodwa ndifuna ukukholelwa ukuba ukuzola kukubakho isithwathwa. Kwaye ngoku izilungiso zokugqibela zentlanganiso enkulu ebomini bhinqa elihle lihambayo, eliza kwenzeka, njengesiqhelo, liya kulungiswa ngengozi.
Ngalo mfihlelo ebomini bomntu kaMaxim Averin, akukho mntu wawazi kwada kutshanje. Khangela apha
Indlela yokuhlangabezana neengxaki kwaye uhlale uzolile
Inkqubo yokucoca i-thermage
Isidlo kunye neendwangu, ubhontshisi kunye namazambane
I-Toxicosis ngexesha lokukhulelwa kunye nendlela yokulwa nayo
Yintoni endiyenzayo xa ndithandayo?
Ilayiti yelayisi kwi-microwave